I-Darodar Traffic Rocks Esikhathini Sakho? - Uchwepheshe We-Semalt Uyazi Okufanele Ukwenze
UJulia Vashneva, Semalt iMenenja yeMpumelelo yeMakhasimende Ephezulu, wabelane ngokuhlangenwe nakho kwakhe ukuthi wabhekana kanjani nogaxekile ngesiRashiya.
Abakwa-spammers basebenza futhi, futhi kufanele sithathe izinyathelo zokuziqeda. Ngesikhathi ithrafikhi yogaxekile yaseRussia ihlasela iwebhusayithi yami, nganquma ukumba ngaphezulu futhi ngimangele ukubona ukuthi ugaxekile omusha uzama ukuphazamisa idatha yami ye-Google Analytics - high pr sites. Okokuqala, ngibheke umgwaqo wokudlulisela phambili ukuze ngiyazi ukuthi kungani iwebhusayithi yami ithola okuningi kwezithuthi kusuka eRussia. Ngithole leli cala ngesikhathi esithile futhi nganquma ukuthatha izinyathelo. Isigaxekile saseRussia sifikile kwisayithi elandelayo: iforamu.topic darodar.com.
Lapho ngivula lesi sixhumanisi futhi ngilandela okuthunyelwe okumbalwa, ngithole ukuthi abaningi be-spammers baxoxa ngezindlela zokubhubhisa amawebhusayithi. Lesi sixhumanisi sangithumelela ekuthengiseni amasayithi afana ne-eBay.com, Amazon.com, ne-Alibaba.com. Ngahlulekile ukuqonda ukuthi yini abagaxekile abazama ukuyenza, kodwa ekugcineni, ngazi ukuthi babezama ukungikhohlisa ukuze ngithenge okuthile kusuka kuzixhumanisi zabo. Ngabe ngiphenya umbiko wami wekhasi futhi ngathola ukuthi elinye lamakhasi alinganiselwe kuwebhusayithi yami. Ngamangala ukwazi ukuthi ukuxhumana kwekhasi elifanayo kwakukhona kumasayithi abo bonke amaklayenti ami. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uzothola leli khasi kumbiko wekhasi lekhasi njengoba abaduni nabagaxekile basebenzisa i-URL "/" ukukhohlisa amaphrofayela akho wezokuxhumana nabantu kanye namawebhusayithi.
Abakwa-spammers bazama ukuthumela idatha efanayo kuwo wonke ama-akhawunti we-Google Analytics. Futhi manje, kulula kuwe ukuthola lesi sixhumanisi bese uyivimbela kudeshibhodi yakho ye-Google Analytics. badinga ikhodi ye-analytics yedatha kanye nenombolo ye-UA ye-akhawunti yakho, etholakalayo kwi-intanethi mahhala. Ikhodi kanye nenombolo ye-akhawunti ingasetshenziswa ukuvimbela isayithi le-spammer. Qinisekisa ukuthi idatha yayo ayibhalisiwe ku-akhawunti yabo ye-Google Analytics. Esikhundleni salokho, kufanele kubhalwe ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ukuzenzekelayo okulula kungenza umkhiqizo we-akhawunti ye-akhawunti ye-Google Analytics. inkinga nje ye-Google Analytics njengabantu abathile bathi bangumgwaqo osemthethweni. Ngamanje ngisebenzisa ama-analytics eWebtrends kumasayithi ambalwa ne-akhawunti ye-Google Analytics. I-Webtrends ayisho lutho mayelana nokugaxekile kogaxekile kanye ne-traffic fake, ngakho isiphetho sami ukuthi ukuhlaselwa kwe-Google Analytics. Ngikholelwa ukuthi benza kanjalo ukuze bakhohlise abasebenzisi abangenacala be-Google Analytics ukuze abantu abaningi futhi bangathenga kusuka kuzixhumanisi zabo ezihlobene.
Ngeshwa, akunakwenzeka ukuwayeka ngokuphelele. Njengoba idatha edalwe ingabanjwanga kuseva yakho, ayikho indlela yokulahla laba spammers. Kodwa ungakwazi ukuqeda idatha kusuka ku-Google Analytics, uqiniseke ukuthi izibalo zakho zifanelana nokusebenza kwangempela.
Indlela elula yokuvimbela abakwa-Russian spammers kanye ne-traffic kusuka ezinhlelweni zabo zokudlulisela phambili ngokudala izihlungi ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Yiya kusigaba somqondisi bese uchofoza kukho okukhethwa kukho. Kufanele uqiniseke ukuthi usetshenzisile ukubukwa "okuhlungiwe," lapho kuzodingeka ukengeze izihlungi ezintsha. Dala ezinye izihlungi futhi ungabandakanyi ithrafikhi yokudluliselwa kumninimzi wegama (co.lumb.co). Ungakhohlwa ukuqinisekisa isihlungi ngaphambi kokulondoloza ushintsho.
Ngithemba ukuthi le miyalelo izokuzuzisa wena kanye newebhusayithi yakho ngezinga elikhulu. Uma ushintshwe inombolo ephawulekayo yogaxekile, kufanele uxhumane nochwepheshe we-IT bese uxazulula inkinga yakho ngokushesha.